आज धनतेरसः धनतेरसमा के किन्ने ? कस्ता सामान किन्दा हुन्छ धनलाभ, पूजाविधिसहित - DURBAR TIMES
HomeCulture & Religionआज धनतेरसः धनतेरसमा के किन्ने ? कस्ता सामान किन्दा हुन्छ धनलाभ,...
आज धनतेरसः धनतेरसमा के किन्ने ? कस्ता सामान किन्दा हुन्छ धनलाभ, पूजाविधिसहित
एजेन्सी – कात्तिक कृष्ण त्रयोदशीका दिन धनतेरस पर्व मनाइन्छ । कात्तिक मासको कृष्ण पक्षको त्रयोदशीका दिन समुन्द्र मन्थनका क्रममा भगवान धनवन्तरी एउटा कलश लिएर प्रकट भएका थिए । त्यसैले हरेक वर्ष धनतेरस पर्व मनाउने गरिन्छ । भगवान् धनवन्तरी एउटा कलश लिएर उत्पन्न भएकाले यस दिन हरेक वर्ष भाँडा किन्ने परम्परा रहेको छ ।
शुभ मुहूर्तमा आजको दिन खरिद गरिएका सामानहरुलाई पूजा गर्ने गरिन्छ । शुभ फल प्राप्त गर्नका लािग शुभ मुहूर्तमा पूजा गर्नुपर्ने हुन्छ । यो वर्ष धनतेरसको शुभ मुहूर्त साँझ ५ बजेर ४९ मिनेट जाँदा शुरु हुने र ६ बजेर २० मिनेटसम्म रहन्छ । यो शुभ मुहूर्त २७ मिनेटसम्म रहन्छ । यस दिन केही विशेष चीज जस्तै, चाँदी, सुन, कुचो, भाँडा किन्ने परम्परा छ ।
धनतेरस पूजाको विधि
धनतेरसको पूजाका लागि प्रदोष काल सबैभन्दा उत्तम समय हो । आज ५ बजेर ४३ मिनेटबाट ८ बजेर २२ मिनेटसम्म प्रदोष काल रहन्छ । यसै समय पूजा गर्न सकिन्छ । यसै समयमा पनि सामानहरु खरिद गर्न सकिन्छ । प्रदोष कालमा घ्युको दियो जलाउने र कुबेरलाई सेतो मिठाई र धनवन्तरी भगवानलाई पहेँलो मिठाई चढाउनुपर्छ । त्यसपछि ‘ॐ ह्रीं कुबेराय नमः’ जप्ने र ‘धनवन्तरीस्तोत्र’ पाठ गर्ने । यसमा लक्ष्मी र गणेश भगवानको पूजा गर्ने गर्नुपर्छ । यसै दिन पञ्चोपचारको पूजा पनि गर्नुपर्छ । साथै, सामुन्ने माटोको दियो जलाउने र मिठाईको भोग लगाउने गर्नुपर्छ ।
धनतेरसमा के किन्ने ?
धातुका भाडा जसमा पानीको सामाग्री भए धेरै राम्रो
गणेश लक्ष्मीको मूर्ति
माटो वा फलामको दीयो ।
आर्थिक लाभका लागि पानीका भाडा
कारोबारमा विस्तारका लागि धातुको दियो
सन्तान सम्बन्धी समस्याका लागि तामाको थाली
स्वास्थ्य तथा आयुका लागि घन्ट
घरमा सुख शान्ति र प्रेमका लागि खाना पकाउने भाडा
काठमान्डौ | नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले मङ्सिर १ गते परेको भाइटीकामादाजुभाइले दिदीबहिनीको हातबाट टीका लागाउनुहुन्न भन्ने हल्लाका पछि कुनै शास्त्रीयआधार नरहेको जनाएको छ । समितिका सदस्य सचिव सूर्यप्रसाद ढुङ्गेलले आज विज्ञप्ति जारी गरी मङ्सिर १५ गतेसम्मचान्द्रमास अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष नै रह…
Previous articleजन्मदिनमा आविष्कार केन्द्रलाई ५० हजार
Next articleलिभरपुलका फरवार्ड मोहमद सलाहलाई कोरोना